Ndị na-ekpo ọkụ eletrik na-eweta Enyemaka Enyemaka na kpo oku n'èzí
Ọnụ gas. Okwu abụọ nwere ike imenye ụjọ n'ụdị akpa ego kachasị mma, yana n'ụzọ anyị nwere ike isi chebeghi mbụ. Ebe obibi kpo oku n'èzí bụ otu ihe atụ. Ọ bụ ezie na ụdị gas dị iche iche gas na-ekpo ọkụ n'èzí gụnyere Infrared Heater na Propane Heaters maka ebe dị n'èzí ...
GN IS B THE NT BKW BKW BKW AKWISTKW MKW MKW MKWISTKWISTKW ANDD AND AH AND?
Banyere nnukwu ọdịiche dị n'etiti ikuku na ikuku na ikuku, ya bụ, ikuku ahụ na-eji teknụzụ nke ikuku karịa nke teknụzụ dị elu, yabụ ị nwere ike ịgafe ya dịka ịchọrọ ịchọrọ ebe ikuku ikuku enweghị ike. Mana ikwu okwu kachasị, onye na-agbakwunye ụfụ na mgbakwunye na-enwe ...